कोरोना भाइरस बिरुद्धको खोप कहिले सम्ममा आउँछ ? | Yangwarak Focus
Home देश कोरोना भाइरस बिरुद्धको खोप कहिले सम्ममा आउँछ ?
कोरोना भाइरस बिरुद्धको खोप कहिले सम्ममा आउँछ ?
१३ भाद्र २०७७, शनिबार १३:३३
कोरोना नेपालसम्म आइपुग्दैन ।’, ‘नेपालीको प्रतिरक्षा क्षमताले सजिलै कोरोना भाइरसलाई जित्नेछ ।’, ‘कोरोना लागेमा तातो पानी र बेसार खाएमा निको हुन्छ ।’ यस्ता यस्तै मनगढन्ते हल्ला फैलिरहँदा धेरैलाई लागेको थियो, कोरोनाले अब केही गर्दैन । तर, अहिले स्थिति फरक छ । कोरोनाले सर्वत्र भय र आतंक पैदा गरेको छ । कोरोना संक्रमणको दर र मृत्यु दरसमेत अनियन्त्रित ढंगले बढ्दो मात्रामा छ । यस्तो अवस्थामा धेरैका लागि चासो र सरोकार बनेको छ, कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ।आखिर कहिले यो खोप तयार हुन्छ ? हामीकहाँ कहिले व्यवहारिक प्रयोगमा आउँछ ? यसै सन्दर्भमा बिबिसीले एउटा रिपोर्ट प्रकासित गरेको छ, कोरोना भाइरसको खोपका लागि अब विश्वले कहिलेसम्म प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार चीनका तीन, अमेरिकाका दुई र बेलायतका एक खोप परीक्षणको अन्तिम चरणमा छ । यसमा तीन अलग टेक्नोलोजी प्लेटफर्म प्रयोग भइरहेको बताइन्छ । बिबिसी रिपोर्ट अनुसार बेलायतमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र ग्लोबल ड्रग्स फर्मा एस्टरजेनले मिलेर खोप बनाइरहेको छ, त्यसमा कोरोना भाइरसँग मिल्दोजुल्दो भाइरस प्रयोग गरिएको छ । अमेरिककाको औषधि कम्पनीले जुन खोपमा काम गरिरहेको छ, त्यसमा जेनेटिक म्याटेरियलको मद्दतले स्पाइक प्रोटिन तयार गरिनेछ । त्यसैगरी चीनमा सायनोवेक बायोटेक नामक औषधि कम्पनीले काम गरिरहेको छ, जसले उपचारका लागि भाइरसलाई नै प्रयोग गरिरहेको छ । यी सबै खोपको सुरक्षा र इम्युन रेस्पोन्स थाहा पाउनका लागि अपेक्षाकृत कम व्यक्तिमाथि परीक्षण भइसकेको छ । अब यी खोपहरुलाई तेस्रो चरणको प्रयोग गरिनेछ।
Previous articleकारागार बाट भागेका दुई सहित चार जना २० बर्ष पछि पक्राउ
Next articleसंघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचद्वारा झापा जिल्ला सिडीओ र डीएसपीलाई अबिलम्ब पदमुक्त गरि हत्यारालाई जन्मकैद सजाय को माग
सुमन सहयात्री - १३ भाद्र २०७७, शनिबार १३:३३